Version 0.2.6 – Regressions Anuguna
June 17, 2009 by dalabyo 2 Comments
Waxaa laga yaabaa inaad dareento ma jirin ogeysiis ku saabsan 0.2.5. Sababta in uu ahaa arrin sahlan sida cayayaanka ka dhaca hore la helay ka hor inta aan si boostada dhawaaqay awoodin. Kuwa laba version looga gol leeyahay si uu u xaliyo qaar ka mid ah dhibaato la bedelo url dhacaya af oo kala duwan, waxaana rajeyneynaa in 0.2.6 boos doonaa in. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhamaan intii sheegay cayayaanka iyo caawiyeen imtixaanka. Oo waxaannu rajaynaynaa in aan heli doonaa ka yar oo ka yar kuwa sii daayo dhalato mustaqbalka.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: bugfix, plugin wordpress
Hi. Waxaan maalin kale fariin ka tagay, weydiinaya haddii feature tani waxay ahayd laga heli karaa blogger. Waxaan ahaa dadkii u sheegay shaqaynaysay waxa on, oo waxay noqon karin dadkii ugu dhaqsaha badan. Waxaan la sheegi lahaa by email. Toban maalmood ka dib, Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado waxa rajada ku eg.
Dib u yara sababta oo ah cayayaanka ugu danbeeyay iyo cusboonaynta in WordPress 2.8, laakiin ka shaqeeya in, weli waxaan u maleynayaa in dhowr maalmood hab. Waan ka xumahay oo ku saabsan dib u dhac ku.